akpaka ice igbe kuki iji kuki na-eme ma ...
Obere ikike maamoul mmepụta akara
desktọọpụ akpaka obere kubba kibbeh encrusting mach ...
Min.Order ibu: 1 set/order
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: T/T, L/C,D/A,D/P,
Nke a igwe jupụtara akpaka ụdị mejupụtara otu encrusting igwe, onye stamping igwe na otu tree-kwado igwe. Site na-amụba ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe nhọrọ ngwá na ngwaọrụ, a mmepụta akara nwekwara ike iji na-emepụta ọtụtụ ihe oriri ndị ọzọ / nri / pastries.
4000 ~ 6000 PC / Ọrụ Nchịkwa
2000 ~ 4500 ibe / Ọrụ Nchịkwa
3000 ~ 7000 PC / Ọrụ Nchịkwa
15 ~ 180g / mpempe
1) Zọpụta ọrụ na-eri na n'ikpeazụ. Ike nke na-eme ka dị iche iche ihe oriri
2) Ezi Uche price na elu ikike.
3) Easy maka ọrụ, nhicha, gbakọta, na ịrụzi.
4) Dị Iche Iche ihe nwere ike etinyere maka encrusting ngwaahịa.
Previous: akpaka Brazil chicken coxinha Ndinam igwe
Next: akpaka ice ude mochi Ndinam igwe
Maamoul akpụ Machine
Maamoul Ime Machine
Maamoul edikan Line
Obere Maamoul Machine
akpaka kubba kibbeh kubbeh Ndinam igwe
Automatic abụọ agba bisikiiti Ndinam igwe
akpaka abụọ agba yipụ jupụtara kuki ...
akpaka painiapulu achicha Ndinam igwe
akpaka Brazil chicken coxinha Ndinam igwe